Vavaka ho an'i San Marcos de León. ? mampitony, miasa ary mitia.
Vavaka ho an'i San Marcos de León. Mahery ny vavaka rehetra, fa ny vavaka ho an'ny marika masina maronin'ny leon ny mandreraka, ho an'ny fitiavana, ny asa ary ny fanamarihana manokana, satria i Saint Mark dia akaiky an'i Jesosy fony izy tet on an-tany.
Ny Filazantsaran’i San Marcos no tena manan-danja indrindra satria manana ny dikan-dahatsoratra ao am-pon'ny zaza, toa an'i Marcos tamin'izany fotoana izany, izay mahatonga azy ho doka tsy misy tsiny sy feno fahamarinana izay misy fiantraikany amin'ny olona rehetra mandalo ny diany taratasy.
Androany, San Marcos dia nanjary rohy mahomby hangatahana amin'Andriamanitra amin'ny fangatahana mahery vaika, na manao ahoana na manao ahoana mahasarotra ny fahagagana antenaina.
I Saint Mark, naman'i Jesosy, dia lasa sakaizan'izay rehetra mila ao am-pony sy mila zavatra vita amin'ny fankasitrahany avy any an-danitra.
1 Miasa ve ny vavaka ho an'i Saint Mark of Leon?
1.1 Vavaka ho an'i Saint Mark of Leon hanandramana olona
1.2 Vavak'i Saint Mark de Leon noho ny fitiavana tsy hay atao
1.3 Vavak'i Saint Mark of Leon ho an'ny asa
1.4 Ho tonga ny vavaka | ny fitiavana
Miasa ve ny vavaka ho an'i Saint Mark of Leon?
San Marcos de León dia akaiky an'i Jesosy Kristy hatrany, noho izany dia mangataka azy ho mahomby, satria nifona ho antsika eo alohan'ny namany izy.
Ny vavaka tsy maintsy natao avy amin'ny halalin'ny fanahy y am-pahatsorana tanteraka, tadidio fa nangataka fahagagana izahay na ho voavaha toe-javatra, ka izany no tsy maintsy anontanianao mazava ny zavatra ilaina.
Miaraka amin'ny vavaka amin'i Saint Mark of Leon dia mitovy. Ilaina ny finoana.
Fantatr'i Masindahy Maros hoe inona ny fahitana ny fahafatesan'ny namany, fantany ny tokony hitory ny tenin'Andriamanitra rehefa enjehina izy dia nijaly ny alahelo sy ny alahelo, tahotra ny tsy fantatra ary ny fahoriana rehetra izay azo iharan'izany.
Izany no antony Rehefa manao fangatahana ianao dia tsy mila lava hamaly azy, satria fantany izay mety hijaly eto an-tany ary ankehitriny dia mpiara-belona antsika any an-danitra Izy.
Ny heriny dia infinito, ireo fahagagana tsy hita isa. Misy olona an'arivony maro afaka mijoro ho vavolombelona ny amin'ny heriny, izany no antony vavaka San Marcos de León dia mahomby.
Vavaka ho an'i Saint Mark of Leon hanandramana olona
San Marcos de León ianao izay nitondra ny tenin'i Kristy ho an'ny el tontolo henoy ny fivavako.
Enga anie hahatratra ny fahamarinana ny tanjakao sy ny fahavononanao ary enga anie ka ho resy ny fahavaloko alohan'ny San Marcos tsara, miaraka amin'i ny hery an'ny Liona sy ny fahefany manjaka dia mahatonga ny olona mikasa hanao ahy tsy mety handohalika eo imason'Andriamanitra ary hanova ny sainy.
Miangavy ho ahy ianao izay namoy ny ainao hampahafantatra ny tenin'ny Tompo Avo Indrindra sy hanatrika ny fangatahako ...
(Manao ny fangatahana izahay)
Tsy mila ny faharatsiana olona miaraka aminy aho, fa ny manisy ratsy fotsiny ihany no nahatafintohina ahy, ka miverina amiko amin'ny fomba malefaka sy tsara izy ireo.
Enga anie ny fitiavana ny fandresena ny ratsy ary ny fandriako ho fandriampahalemana.Ireo rehetra angatahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika ary mangataka aminao aho mba henoy ny vavaka ataoko.
Ny vavaka dia azo atao na inona na inona antony ary tsy misy tia tena ary tsy misy dikany ary tsy manan-danja noho ny hafa iray.
Mila olona daholo ny olona ary mila mifanelanelana alohan'ny lanitra isika hahazoantsika izay ilaintsika.
El mangataha ho mandreraka Ny olona iray, matetika, zavatra iray iainana na fahafatesana.
Azo ampiharina amin'ny fomba maro, toy izany any am-piasana, ny trano, miaraka amin'ny havana o namana y amor.
Miaraka amin'ity vavaka ity dia aza mitady mikapoka na handefa ny sitrapon'ny olon-kafa fa mba hahay handresy lahatra kely mba hahatratrarana tanjona izay mahafa-po ho an'ny antoko rehetra voakasik'izany.
Vavak'i Saint Mark de Leon noho ny fitiavana tsy hay atao
Hotahin'i Saint Mark Leon, ianareo izay manao izay rehetra tsy azo atao, izay nikolokolo ilay dragona sy ny liona. Ataovy (tsarovy ny anaran 'olona) ny fihetseham-poko, ny fitiavako, ny sorona sorona.
Miangavy anao aho fa ny fony tsy mibebaka dia tratry ny lelafo feno fitiavana. Rehefa mifoha amin'ny torimasonao ianao, dia mila tiako ianao hieritreritra ahy.
Oh, San Marcos de León, ianao izay tsy namela sy nahavita nampandeha ilay bibikely matanjaka indrindra, ka mangataka aminao aho mba handinika ahy ilay cray ahy, andao, avia, aza avela hisy hijanona anao, avelao aho mifanitsy amin 'ny lalan'ny fitiavana, izay itiavanao ahy miaraka amin' ilay hery izay tiako sy ivavahako anao.
Ho an'ireo eritreritra izay (anaran'ny olona) dia manatona anao aho, ry Saint Mark, ka amin'ny nofinofinao sy ny nofinofinao dia amin'ny anaran'Andriamanitra sy amin'ny alalako, enga anie ho ao am-ponao ny fitiavanao, enga anie ho ao am-ponao aho .
Ampio aho hanasitrana io fo tratran'ny tsy firaharahiana io ianao ary hanova ny fahoriako rehetra ho fitiavana feno valiny.
Ilaina foana ny mivavaka mivavaka amin'i Saint Mark of Leon noho ny fitiavana.
Ny fitiavana dia iray amin'ireo antony mahatonga ny olombelona ho lasa fifandraisana tsy tapaka amin'ny lanitra.
na tsy tokony avaly inona sarotra ny mandalo miaraka amin'ireo mpivady vavaka ho an'ny fitiavana San Marcos de León dia mahery.
Amin'ity karazana fangatahana ity dia tokony hiresaka am-pahatsorana tanteraka ny olona iray. Aza adino fa miresaka amin'ny olona izay mijaly eto an-tany isika ary mandinika ireo zava-tsarotra rehetra ireo ary izany no antony hahalalany antsika tanteraka.
Rehefa manao vavaka amin'ny fisalasalana ny angovo ratsy izay avoaka dia mahatonga ny vavaka tsy hampiakatra, izany no antony tsy maintsy anontaniana miaraka amin'ny finoana, ka maharesy lahatra fa ilay Mpamorona ny zava-drehetra dia vonona hanampy antsika, izay tsy foana ny fotoana itadiavantsika mivavaka.
Ny vavaka tsy misy finoana dia toy ny tsy manao na inona na inona ary rehefa tsy maniry mafy ny fangatahana mifandraika amin'ny fitiavana ianao, ny finoana no zava-miafina izay hanampy ny zava-drehetra hamaha haingana haingana kokoa.
Vavak'i Saint Mark of Leon ho an'ny asa
Inty aho, ry San Marcos de León, hanome voninahitra anao amin'ny fanetren-tena!
Hanakaiky kokoa ny zavatra nambaranao; Hidera ny fahasoavanao tsy manam-petra.
Amin'ny maha-mpino tsy mivadika ahy, dia nanompo tamim-pahasoavana hatrany ny drafitr'Andriamanitra aho, ary nanatanjaka ny fanahiko tamin'ny alalàn'ny soratra masina.
Noho izany ry evanjelista malala, mangataka aminao aho anio mba omeo ahy izay sitrakao efa fantatrao ...
(Lazao ny fankasitrahana amin'ny asa)
Fantatrao fa miaraka Amiko dia mitady ny tsara ho an'ny tenako sy ny ahy fotsiny aho ary tsy maniry afa-tsy ny manakaiky ny Tompo. Fantatro fa hohenoina aho satria ...
Famindrampo ihany ianao.
Anontanio an'i San Marcos de León zavatra misy ifandraisany amin'ny fiainantsika miasa Izy io dia tanjon'ny tena zava-dehibe.
Ny toerana iasantsika dia ny trano fonenantsika faharoa satria misy ora maro andanianay ao, ka izany no antony mahatonga ny toe-javatra tsy ahafahantsika manao mihoatra ny fananganana vavaka miaraka am-pinoana mba hahafahana mamaha izany.
Ity vavaka ity dia mety hitarika asa iray izay niandrasantsika fotoana ela na hamahana ireo fanelingelenana mety hanakana ny asantsika tsy hikoriana tsara, ny fangatahana asa rehetra azonao angatahina avy amin'i San Marcos ary hanampy anao izy.
Ho tonga ny vavaka | ny fitiavana
Amin'ny anaran'Andriamanitra dia miantso anao aho, ilay fanahin'ny fanahin'ny Fanahy Masin'i Saint-cypian, ary ny famoizam-po Don Juan ny lalana, ny fanahin'i John miner Ny lalana sy ny lalana ary ny toerana, fanahin'ny rivotra efatra an'ny Fanahy Masin'i St Mark Leon.
Ataoko ho anao ity vavaka ho an'ny mariky ny liona tonga Azoko atao ny manampy azy ireo hahay hifehy ireo fahatsapana dimy.
Ny eritreritra, ny fitsarana, ary ny sitrapon'ny (anaran'ny olona) Fa tsy afaka mihinana na matory aho, tsy afaka misotro na mandeha.
Enga anie ho ao an-tsaiko ny eritreriny mandra-pahatongan'ny tongotro hanakana ahy hahatsiaro ho mibebaka sy manetry tena Miatrika ahy amin'ny fanajana mendrika antsika rehetra.
Miaraka aminao 2 no fahitako anao, amin'ny 3 mamatotra anao aho, ny rà sotroiko ary ny fo omeko anao ny masoko jamba anao ary ny sitrapoko ho anao koa, ataovy izany.
Te hamita ny lahatsoratra atolotray amin'i San Marcos de León izahay tonga amin'ny fitiavana.
Tena vavaka mafy sy malaza tokoa io.
Nivavaka tamin’i Md. Marka sy San cipriano.
Vavaka ho an'i Saint Nicholas an'i Bari
Mitadiava vavaka roa mahery mba hahazoana asa maika